रात परेपछि सधै सडकमा उभिने उनि को हुन ?
प्रदिप राजवंशी, नेपालगन्ज : दिन प्रतिदिन नेपालगन्जमा यौन क्रियापलापका गतिविधिका समाचार आइरहदाँ मैले उनलाई झट्ट सम्झीए । धेरैले भनेको पनि सुनेको हो यौन धन्दामा लागेकाहरु अघिपछि भन्दा रातपरेपछि घरबाहिर निस्कन्छन् । मैले उनलाई धेरै पटक मेकप गरेर राम्री भएर सडकमा कसैलाई पर्खेको जस्तो देखिरहेको हो ।
मान्छे निकै राम्री थिइन् उनि । पहिले पहिले त मलाई पनि मन परेको थियो पछि केहि साथिहरुले यस्तो रातिमा कसैलाई दिनहुँ पर्खिरहेको जस्तो देखिने त कल गर्ल हुनपर्छ भनेपछि म पछि हटेको हुँ । मलाई कल गर्ल भनेपछि उनको अनुहार हेर्न पनि मन लागेन ।
मेरो मनले सोच्थो किन यति राम्री मान्छेपनि यस्तो घिनलाग्दो काममा लागेको होला रु पैसा त सबैलाई आवश्यक पर्छ यो केटिलाई कति पैसा चाहिएको होला र यस्तो काम गर्छिन होला रु कसैलाई यस्तो बानि परेपछि त्यहि कुरा गर्न मन लाग्छ रे भन्ने पनि सुन्ने गरेको छु । जे होस उनि मलाई बास्तवमै राम्रो लाग्दथो । तर मलाई राम्रो लागेर के गर्न उनको बानि बाहिर बाट हेर्दा राम्रो देखिएपछि सडकमा ग्राहक पर्खेर बस्ने खालको रैछ भन्ने मेरो मनमा कुरा खेल्न थालेपछि मेरो मन उनितिर बाट टाढिदै गएको थियो ।
अहिले पनि उनलाई त्यहि सडकमा देखिरहेको हुन्छु । मैले र मेरा साथिहरुले उनलाई कल गर्ल हो कि भनेर संखा गर्नु पनि कारण छ त्यो के हो भने त्यहि स्थानमा अन्य कल गर्लहरुपनि रातको समयमा एतै भेटिने गर्दथे । उनि अलि चन्चले थिइन उनको चन्चलता देखेर धेरैले आखाँ लाउने गर्दर्थे । उनको घरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर नै थियो । नेपालगन्जमा यसरी रातको समयमा सडकमा एक्लै उभिएर कसैलाई पर्खेको जस्तो देखिए उस्तै मान्छे त होला भनेर मनमा लिइहाल्छन ।
उनको नाम किन नलेखेको होला भन्ने लाग्न सक्छ । मलाई आफ्नो भन्दा पनि उनको माया धेरै लाग्छ सत्य रामोराम । मैले नि पहिले जुन रुपमा उनलाई उनलाई हेर्न लागेको थिए त्यो एकदम गलत रहेछ । उनि त एक कर्मसियल बैंकमा जागिर गर्ने रहेछिन । उनको घर कोहलपुर रहेछ एक दिन राति कोहलपुर वान पर्नेभएर बसमा बसेको थिए त्यहि बेला उनलाई पनि भटे । मेरो छेउमै बसेकी उनिसगं मैले कुरा गर्न थाले । मैले भने तपाईलाई त मैले फलानो पसल नजिकै रहेको बाटोमा देख्ने गर्दर्थे ।
उनले भनिन्, बैकमा रातिसम्म काम हुने भएकाले घरजादाँ अलि अवेर हुन्छ । कहिले काँहि भाईलाई लिन बोलाउछु कहिले यस्तै बसलाई पर्खेर बस्छु । उनले नम्र भएर भनिरहदाँ उनि प्रति मैले गर्ने इज्जत झनै बढेर आयो । मैले उनिसगं माफि पनि मागे । उनले किन म सगं माफि माग्नुभएको भनिन् । मैले उनिलाई आफुले गलत नजरले हेरेको भन्न पनि सकिन । मैले उनलाई यदि गलत नजरले हेरेको भनेको भए उनि म सगं रिसाउने होकि भन्ने डर मलाई थियो । मैले भने तिमिसगं माफी मागेर तिमिलाई नभनेका, प्रस्तुत नगरेका मेरा मनका पापहरु पखाल्न छ । उनले मेरो कुरालाई अलि अनुझेको जस्तो गरिन र मुसुमुसु हासिन ।
मलाई पछुतो पनि लायो । विस्तारै उनि सगं पछि पनि कुरा हुदै गयो । अहिले त हामि धेरै मिल्ने साथि भएका छौ । म त उनिलाई माया गर्छु तर उनले के भन्छिन त्यो भने थाहा छैन । उनिसगं बेला बखतमा भेट हुन्छ तर मैले उनलाई माया गर्छु भन्न सकिरहेको छैन । कसरी भनु म तिमिलाई माया गर्छु अनि विवाह गर्न चाहन्छु भनेर ?
मैले उनिसगं सगत गरेर के बुझे भने कसैलाई पनि टाढाबाट हेरेर उ प्रति मनसाय बनाउनु गलत कार्य हो । त्यसमाथि महिला माथि गरिने दुर्ववहार त झनै गलत कार्य हो । कोहि राति सडकमा एक्लै उभिदा यौन क्रियाकलापमा लाग्ने गरेको हुदैन । सबैले सकारात्मक रुपमा सोचौ । आफ्नो सोच राम्रो भए अरुलाई पनि राम्रो देख्नुहुनेछ ।